Armenia oo dal kale oo Muslim ah ku eedaysay inay ciidankiisu ka dagaallamayaan Azerbaijan | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Armenia oo dal kale oo Muslim ah ku eedaysay inay ciidankiisu ka...
Armenia oo dal kale oo Muslim ah ku eedaysay inay ciidankiisu ka dagaallamayaan Azerbaijan
(Islamabad) 18 Okt 2020 – Pakistan ayaa beenisey wax ay ku sheegtay “war aan raad lahayn” oo ay ku andacoonayso Armenia oo ciidanka Pakistan ku eedaysay inay ku jiraan dagaalka Nagorno-Karabakh.
RW Armenia ee Nikol Pashinyan ayaa horay u sheegay in “Pakistani ay door wayn ku leedahay dagaalka iyagoo ka dhinac dagaallamaya kuwa Azerbaijan,”, taasoo ay war aan waxba ka jirin haatan ku sheegtay Wasaarad Dibadeedka Pakistan oo war soo saartay.
“Waa wax laga shallaayo in hoggaanka Armenia, ay si ay u daboolaan falalka sharci darrada ah ee ay ka wadaan Azerbaijan, ay qaadaan dacaayado mas’uuliyad darro ah, taasoo ay tahay inay joojiyaan.” ayaa lagu yiri warka.
MW Azerbaijan ee Ilham Aliyev ayaa horay u sheegay in ciidanka Azerbaijan ay awood ku filan u leeyihiin inay dhulkooda difaacdaan isla markaana aanay cidna tabantaabo uga baahnayn, balse Armenia ayaa si ay taageero uga hesho Ruushka iyo reer Galbeedka waxay bixinaysaa sawir ah inay iskugu tageen dalal Muslim ah, iyadoo horay Turkiga u eedaysay.
Yeelkeede, Islamabad ayaa se caddaysay in ay taageero siinayso “dalka ay walaalaha yihiin ee Azerbaijan si ay dulmiga iskaga difaacaan.”
Previous articleSomalia oo gebi ahaanba tayo xumo darteed looga saaray qiimaynta waxbarashada caalamka
Next articleTurkiga oo Black Sea ka helay gaas kale oo dabiici ah & waqtiga lasoo saarayo